Faur 05.08.2021 05.08.2021
Dzhon Glenn: mhuri, mudzimai, photo, ndege Duration
Ondine Syndrome: Zvinokonzera, tsananguro, kurapwa
Vladimir Lisin: mapikicha, Biography, mhuri, mudzimai, vana
Iyo Line, iyo inotevera documentary yekutanga paApple TV +
Zvikamu zvechikadzi kubereka system
Yakawedzerwa Nhengo dzeMhuri muMandararin
Last updated Oct 9, mugove IEuropean Association of Surfing Doctors inokuzivisai Andrew Schmidt, Emergency Medicine Physician, Mutungamiri weVupenyuguards asina mhirizhonga inotenderera pasi pose paDonwning Nyika yekufuratira yakavhunduka apo vaviri vanofambisa vakazadza muZarautz. SaThe Yurochi yeEuropean Union of Surfing Doctors , iri basa redu rokudzidzisa munhu wese mumvura nezvematambudziko ehutano kuburikidza nekufambisa. Tinoda kukudzidzisa pamusoro pokumira.
Kudyisa kunenge kuchiri kuitika nhasi, kunyange pa "guta" mabheti seZarautz. Pashure pevhidhiyo iyi iwe uchadzivisa vamwe vafrefre uye vamwe vanogara kugungwa kuti varege kunyura uye vanzwisise zviri nani kurwisa kwemvura uye kunyura kunomutsazve. Mukutanga Video pasi apa tinokurukura nezve "Kudzora Kudzorera Kwevasungwa"Pakupindura kurapwa kwaMaya Gabeira uyo akazununguka kuNazareta gore rapera asi akadzorerwa nemigumisiro yakanaka.
Vhidhiyo yechipiri ndeyevhidhiyo yakazara pamusoro pekudzikisazve kunyura kwemvura. Chero Surferfe inogona kuve yakabatanidzwa mukurwira uye kurapwa kwevanhu vanokonzera kunyura mumhenderekedzo yegungwa, kutanga, pakati pekudzivirira kana nyanzvi.
Iwe unogona kuva wekutanga panzvimbo yacho, uye kana iwe ukawedzerwa, kufungidzira iwe uchasangana nemamiriro ezvinhu apo iwe unoda kuziva ABC yako pakunyura. Izvo zvichave zvakakosha zvikuru kune shamwari yako inoshaya kana iwe uchinzwisisa zvidzidzo pamusoro pezvinoitika kumunhu anonyima uye iwe unofanira kuzvibata. Uye zvechokwadi, izvi zvicharamba zvichivandudza sezvo iwe uchazviwanira iwe wakadzidziswa mukuchengetedza hupenyu uye CPR yekutanga uye unyanzvi hwokutanga rubatsiro.
Ngatitaurirei Andrew Schmidt, Emergency Medicine Physician, Director of Lifeguards pasina mhirizhonga inorayira pasi rose kuDedwning, muvambi wekudzidzira webusaiti drowning. Andrew ari kukutora iwe muhurukuro yake kuburikidza nezvinhu zvinokosha zvezvinhu zvaunoda kuziva apo unosangana nemunhu anonaya.
Takashandisa chiitiko muNazareta gore rapera sechiratidza mhaka uye yakasimbisa zvinhu zvinokosha zvikuru kuziva. Iko tariro yedu kuti idzi dzidziso dzinovandudza ruzivo rwako rwekudzidzira kunyura uye kurapwa kwekunyura, kuitira kuti iwe rimwe zuva ubatsire mumwe munhu kuti afanire mune zvaanoda.
EASD inoshuva kubatanidza humwe humwe uchapupu-hwakagadziriswa mazano ekudzikinura kwemvura, kurinda hupenyu nekusimbiswa kweupenyu kune avo vanogona kukuvara zvakanyanya, mune Kutsvaga Kwakawedzerwa Kwemishonga Kubatsirana Kwoupenyu ASLS Nzira. Usambokanganwa ketani inonaya yekupona. Bvisa kubva mumvura chete kana wakachengeteka kuita saizvozvo. Regai tizive zvaunofunga mumashoko kuitira kuti tikwanise kuvandudza zvidzidzo zvedu zvekudzivirira kuchengetedza chirwere chine utano hwakachengeteka.
Business , Bhizimisi Vladimir Lisin: mapikicha, Biography, mhuri, mudzimai, vana Chokwadi, chikuru muzvinabhizimisi Vladimir Lisin - mavara uye yakavimbika ndeuke Russian mabhizimisi madenderedzwa. Iye anogara miviri inoti - Russia uye Scotland. Kuchamhembe kuBritish Isles, ndiye muridzi nacho yamambo. Ari kumusha hombe chikamu yokuzvifadza, iye anoda kupedza pane tsvimbo nyika yavo pamwe unonakidza rokuti "Fox Hole", apo mumaawa mashomanana aigona kuumba Thumbnail pamusoro Venice rayo yakasiyana nhare uye migero wakajeka.
Nemhaka muzvinabhizimisi kumisa uye metallurgia kugadzirwa kubva tikaisa zvigayo uye kwebhosvo yamavira. Akakurumbira Magazini "Forbes" haisisina rinorondedzerwa izvozvo pamusoro maviri wevanhu vakapfuma munyika, uye akadhindwa "Finance" rine anoramba ibasa payo mamiriro "vakapfuma murume kuRussia. Chii zvakavanzika kubudirira kwayo muupenyu hwako? Funga nezvemibvunzo iyi zvizere.
Facts kubva Biography Chokwadi, haasi munhu wose anoziva kworudzii murume Vladimir Lisin? Biography muzvinabhizimisi, akakodzerwa wokunyatsoporesa zvirokwazvo. Akanga akaberekerwa Ivanovo, Ndakaberekwa musi May 7, In kururamisira zvinofanira kucherechedzwa kuti sezvo mwana Vladimir Lisin chaiva phlegmatic mwana. Akanga reclusive uye taciturn. Mukomana haana vanoda nokubudisa ake "Ini", tichiramba kuti mimvuri vaanodzidza navo. Mwana akanga asiri munhu anonetsa uye munhu anonetsa. Asi akanga asina zvisina unhu hwakanaka: pfungwa dzake uye kutarisirwa amubatsire kuwana panyaya mana uye fives.
Vaviri vaviri uye threes zvakare, asi vakanga vashoma. Kubva muduku vabereki vakaroverera unhu pake kutsungirira uye kutsunga. Ndokusaka mune ramangwana zvinogona kuunza pakuguma zvose zvaakanga akatanga zvekufamba. Start basa Future oligarch Vladimir Lisin, vane nyika - Russian, akatanga kuita mari paakatendeuka makore 19 okuberekwa. Iye chakagamuchirwa sechinhu zvemagetsi makanika panguva Kuzbass wemarasha.
Zvisinei, jaya akakurumidza kuona kuti basa rake pachava zvishoma nezvishoma pasina dzidzo yepamusorosoro, uye akanyoresa kuSiberia Metallurgical Institute.
Muna , Lisin kare - akapedza basa "injiniya-simbi wezvinonhuhwira. Zvishoma nezvishoma, akaedza rwake pane dzimwe nzvimbo, uye pashure penguva akazova mubatsiri chikamu mukuru. Parallel izvi, akanga mubasa basa chesayenzi uye muna akava mudzidzi akapedza kudzidza paChikoro Ukrainian Research Institute of simbi. Pashure paizvozvo Lisin kushanda simbi zvigayo iri siyana nenzvimbo nzvimbo Russia.
Akashandura nzvimbo dzakadai magiravhusi, uye akanga mubatsiri mukuru injiniya uye mutevedzeri musoro, uye chlenstvoval bhodhi kuti vatungamiriri vakawanda simbi zvigayo. Zvadaro, imwe entrepreneur, akasarudzwa mutevedzeri purezidhendi ezvokutengeserana mamiriro Trans-Cis- Commodites Ltd, iyo chaionekwa chakakura mukwikwidzi iri aruminiyamu pamusika.
Asiwo basa esayenzi Vladimir Lisin, ane mapikicha kazhinji nenguva kudhindwa mumagazini dzakakurumbira mubhizimisi, musakanganwa. Muna , remangwana oligarch unowana dhipuroma Academy of National Economy, uye makore maviri gare gare chikoro doctorate zvidzidzo panguva Moscow University of Steel uye Alloys.
Lisin ndiye muvambi akawandisa mabhuku uye mapepa kwesayenzi pasango kugadzirwa simbi. Muna , kuti tycoon akanga paakavapa musoro weNobel yeSoviet hurumende Award. Zvaakanga awana mumwe mari kuchengetedzeka "Novolipetsk Steel", unosimbisa ane pemvura kambani Worslade Trading, vakanyorwa Ireland, uye akatanga kutengesa simbi kunze. Pashure paizvozvo muzvinabhizimisi ari kutanga kuwana migove makurusa simbi zvigayo, kuwana akabata kudzora mbambo. Oligarch anova mupfumi Pakazosvika , akanga atova muridzi wezvinhu anopfuura 20 mabhiriyoni emadhora.
Asi akauya zvoupfumi kwakaita chakakomba kukuvara yesangano zvemari muzvinabhizimisi, nokuderedza zveminda aro mabhiriyoni 5.
Asi mangwanani Lisin nyaya zvakare akaenda mugomo, uye akakwanisa kuunza kukura Purofiti yayo mabhiriyoni Muna , zvaaiva Ichokwadi, vakawanda vakaedza kuwana kubva kwaari pachivande akazova mari yakazvimirira. Akasimbisa kuti muzvinhu zvakawanda akakwanisa vazvipfumise tichiregeredza zvavo nyanzvi unhu: hwokukurukura, kugona kuwana kutsauswa, funga munyika yose, kunzwisisa pamusika ezvinhu. Muna , Vladimir Sergeyevich aigona kutungamirira kwokubatsira ari Lipetsk nharaunda, asi gare gare akaramba kubatanidzwa mune sarudzo nyasha Mikhail Neyrolina.
Muzvinabhizimisi ari yokufaranuka anosarudza kuita anokanda zvemitambo. Akatanga akatora zvombo paaiva nemakore 12 okuberekwa. Akasarudza kuvaka hwaro pfuti "Fox Hole". Today Lisin Rinotarisira Shooting Union mari apo chikwata chedu. Oligarch uyewo ane yeredhiyo Business FM.
Vladimir Sergeyevich zvakare ndorwevaya nepepanhau chete zita. Iye anouya kamwe pavhiki. Muzvinabhizimisi anoti chinangwa chawo chaiva kumisa yakazvimirira anodhinda bhuku, izvo zvaizoita chinangwa kuongorora chokwadi uye muverengi nomuzikamwi navo.
Ari akaroora uye ane vana vatatu. Muzvinabhizimisi kuedza kuvanza chokwadi kubva venhau pamusoro upenyu hwake pachake. Nezvake tinogona kutaura kuti aiva muenzaniso wakanaka murume mhuri. Wife Vladimira Lisina - ake waunodzidza naye. Iye runobva kukamuri Gallery "Mwaka", apo mifananidzo anonyorwa nokuda vakasarudzwa vemifananidzo private vateresi.
Kuzvikudza kwaro collection - mufananidzo Petrov-Vodkin, iyo murume wake akazvipa, Vladimir Lisin. Vana muzvinabhizimisi - ichi Alexander, Vyacheslav, Dmitry.
Oligarch anoyeuka kuti nehanya ichi pamusoro pavana vako akamukurudzira kuita bhizimisi, kupa nhengo dzemhuri yake upenyu hwomutambarakede. Zvino, mumwe mwanakomana Vladimir Lisin kodzero nhaka huru. Zvisinei, mabhizimisi vakadaro vanoda Russia ndiponesezve National upfumi. Murume akapfuura yeminzwa nzira kubva nyore kusvika billionaire steelmaker, arege vanofanira kuremekedzwa, kunyanya kana ari kutsvaka pachake. Uye Vladimir Sergeyevich aifanira kuvimba chete nesimba ravo. Haadi kukwikwidzana nevamwe vapfumi kutenga umbozha dzimba, Yachts, haana kunyange tsika kupfeka chinhu wachi zvinodhura.
Anoda kuti kuverenga renyaya uye anoda kuti chipfungaire unhu fodya. Muzvinabhizimisi nechokwadi kuti mupfumi vanhu havasi zvakawanda mufaro kupfuura varombo. Similar articles.
Tinoda kukudzidzisa pamusoro pokumira. Kudyisa kunenge kuchiri kuitika nhasi, kunyange pa "guta" mabheti seZarautz. Pashure pevhidhiyo iyi iwe uchadzivisa vamwe vafrefre uye vamwe vanogara kugungwa kuti varege kunyura uye vanzwisise zviri nani kurwisa kwemvura uye kunyura kunomutsazve. Mukutanga Video pasi apa tinokurukura nezve "Kudzora Kudzorera Kwevasungwa"Pakupindura kurapwa kwaMaya Gabeira uyo akazununguka kuNazareta gore rapera asi akadzorerwa nemigumisiro yakanaka.
Chikamu chemukadzi chine kuvhura kwekunze icho yakafukidzwa nenziyo.
Iyo membrane yakatetepa inovhara mukova wemukadzi, yakasununguka uye inoyera masendimita gumi pakureba, ine chimiro chemapendero uye inozorwa nemucosa. Iyo nhengo yemukadzi chikamu chakakosha chehurume hwekubereka sezvo ndipo pane inogamuchira kupinda kwenhengo yemurume uye munhu anoona nezve kuunganidza urume hwemurume kuiendesa kumuromo wechibereko.
Muromo wechibereko ndipo panozoitwa fetereza. Inonziwo nzira yekuzvarwa, Eya, pese panenge pari kusangana nekutsi kwemukadzi, iyi ndiyo ichave nzira iyo kuburikidza nekudzingwa kwemwana. Imwe yemabasa ayo ndeyekuti inoshanda senzira kana nzira yeiyo kudzingwa kweropa panguva yako yekutevera.
Chikamu chekunze chevakadzi chekubereka Chikamu chayo chekunze chinonzi vulva. Iyo inowanikwa mune crotch yemukadzi uye inovhara chikamu chemusuwo wemukadzi.
Ichi chivakwa chekugara chine zita muromo uye ivo vanovhara zvese zviri zviviri kupinda kumukadzi uye mukova weiyo urethra.
Iri rimwe gomba richava mugero uyo Ichashanda kudzinga weti kubva mudundira. Panosangana miromo yemiromo tinogona kuwana a nhengo diki inonyatso kunzwa inonzi clitoris. Uye muchikamu chepamusoro chevhavha tichawana nzvimbo ine nyama ingori holm kubva pakuvhura kwechikadzi. Ndiro gomo reVenus.
Icho chemukati chikamu chechikadzi chekubereka system Mudzimai unobatanidza chikamu chemukati nechokunze sezvataratidza, apa muchibereko. Chibereko chacho chine mativi mativi muchimiro uye inoumbwa neakakura uye akasimba mamhasuru madziro.
Munzvimbo ino ndipo pachave nepamuviri panochengeterwa kukura kwayo, saka mhasuru iyi uchave nekwanisi yekubata uye kuwedzeredza zvese kukura uye kudzinga mwana kana kukura kwayo kwapera.
thoughts on “Kudzora nhengo mudzimai”
13.08.2021 at 19:35
Juzuru on Kudzora nhengo mudzimai